Atletico Madrid vs Real Madrid: Saadaasha Khubarada ee Natiijada Ciyaarta iyo Goolasha
HomeWararka MaantaAtletico Madrid vs Real Madrid: Saadaasha Khubarada ee Natiijada Ciyaarta iyo Goolasha
Khubarada falanqaynta iyo saadaasha ciyaaraaha ee Alex Livie, Karl Matchett, Sam Tighe, Will Tidey, Mike Cummings, Jerrad Peters iyo Alex Dimond ayaa saadaal ay ka bixiyeen Ciyaarta Sabtida dhex mari doonta Atletico Madrid iyo Real Madrid waxa ay u badiyeen in ay gacanta sare yeelan doonto Atletico Madrid oo ay dhibcaha qaadan doonto.
Alex Livie: waxa uu saadaaliyey inay Real Madrid ku badin doonto 1-2, iyadoo uu goolka koowaadna dhalin doono Karim Benzema.
Karl Matchett: khabiirkani waxa uu aaminsan yahay in Atletico Madrid ay ku badin doonto 2-1, iyadoo uu goolka koowaadna u dhalin doono Antoine Griezmann. Waxa uu khabiirku sheegay in inkasta oo Cristiano Ronaldo uu u ciyaari doono Real Madrid in aanu haddana waxba ka tari doonin ciyaarta oo uu garoonka ka bixi doono isagoo guul darraystay.
Sam Tighe: waxa uu saadaaliyey in ay ciyaartu ku dhamaan doonto 1-0 lagu garaaci doono Real Madrid, waxaana goolka u dhalin doona kooxda tababare Diego Simeone weeraryahanka Mario Mandzukic.
Will Tidey: Saadaashiisu waxay noqotay barbar dhac ay ku kala bixi doonaan labada kooxood. Waxa ay ciyaartu ku dhamaan doontaa 2-2, laakiin Fernando Torres ayaa nasiib u heli doona in uu goolka koowaad dhaliyo, waxase laba gool oo darran doori ah ka daba dhalin doonta Real Madrid, iyadoo gebogebada ciyaartana ay Atletico goolka barbar dhaca heli doonto.
Mike Cummings: khabiirkani waxa uu saadaasha ciyaarta ku raacay Will Tidey, waxaanu sheegay in ay ciyaartu ku dhamaan doonto barbar dhac 2-2, hase yeeshee Fernando Torres ayaa wakhti horeba shabaqa ruxi doona. Khabiirku waxa uu intaa raaciyey in ciyaartu ay noqon doonto mid rabshad badan oo ay ciyaartooyadu is xagxagan doonaan.
Jerrad Peters:Waxa uu saadaaliyey in ay natiijada ciyaartu noqon doonto Atletico Madrid 2-1 Real Madrid, waxase goolka koowaad dhalin doona Griezmann.
Alex Dimond: Waxa uu saadaaliyey in ay dhibacaha wadaagi doonaan labada kooxood, isla markaana ay ku dhamaan doonto Atletico Madrid 1-1 Real Madrid, iyadoo uu goolka koowaadna saxeexi doono Mario Mandzukic.
Celtic Oo Markii 37aad Ku Guuleysatay Scottish Cup
27/05/2017 Abdiwahab Ahmed
Besiktas vs Porto 1-1 All Goals & Highlights
Obafemi Martins Oo Cusbitaalka Ku Booqday Demba Ba Oo Lugta Si Xun Uga Jabay